Halkee Ayay Xiddigaha Pierre-Emerick Aubameyang & Henrikh Mkhitaryan Ka Gali Karaan Shaxda Gunners – Kooxda.com
Home 2018 January Ingiriiska, Wararka Maanta Halkee Ayay Xiddigaha Pierre-Emerick Aubameyang & Henrikh Mkhitaryan Ka Gali Karaan Shaxda Gunners
Halkee Ayay Xiddigaha Pierre-Emerick Aubameyang & Henrikh Mkhitaryan Ka Gali Karaan Shaxda Gunners
Arsenal ayaa ku dhow inay lasoo saxiixato weeraryahanka Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang iyo saaxiibkiisa hore Henrikh Mkhitaryan, kaasoo ay Manchester United ka qayb dhigtay heshiiska uu Alexis Sanchez ugu biirayo Old Trafford.
The Mirror Football ayaa fahamsan in Arsenal Heshiiska Shaqsiga Ah La Gaartay Aubameyang, kaasoo go’aansaday inuu ku qasbo inuu dhaqaaqo ka dib markii laga saaray kooxdii sababo edbin ah darteed sabtidii.
Weeraryahanka ayaa maamulka kooxdiisa u sheegay in uu doonayo in uu isaga tago kooxda kadib markii sabtidii laga reebay kulankii bar-baraha ay la galeen Wolfsburg/
Arsenal ayaa sidoo kale kalsooni ku qabta in heshiiska Makhitaryan la dhamaystiri doono todobaadkan iyada oo uu Sanchez u dhaqaaqi doono Old Trafford.
Hadaba halkee ayay ka gali karaan shaxda Arsenal hadii ay dhamaystiraan heshiiskooda:
Imaanshaha Aubameyang ayaa booska kala bixi kara xiddigii xagaagii ku soo biiray kooxda ee Alexandre Lacazette kaas oo aan wax gool ah dhalin 9 kulan oo uu ciyaaray,Xiddiga reer Gabon ayaa ka ciyaari kara weerarka isaga oo ka horayn doona xiddigahaha Mesut Ozil and Mkhitrayan.
Iyaga oo heli doona laba gool dhaliye oo tayo leh Wenger ayaa isku dayi kara in uu labadoodaba ku ciyaaro weerarka isaga oo shaxdiisa ka dhigi kara 4-4-2 isaga oo weerarka ku midayn kara Aubameyang iyo Lacazette, xiddigaha Mkhitaryan Iyo Ozil ayaa sidoo kale ka daba ciyaari kara labadooda iyada oo khadka dhexe loo dayn doono xiddigaha Granit Xhaka Iyo Jack Wilshere.
Hadii uu Wenger doonayo in uu ku wada ciyaaro labada weeraryaan ee Aubameyang Iyo Lacazette laakiin uu ka wel-welsan yahay khadka dhexe iyo daafaciisa waxa uu garabka ka ciyaarsiin karaa Aubameyang maadama uu wakhti hore oo noloshiisa ciyaareed ah ka soo ciyaaray booska garabka.